. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ခရီး တထောက် (၁)
ခရီး တထောက် (၁)
ရန်ကုန်ပြန်ခဲ့တာတော့ ကြာပါပြီ .. ရန်ကုန်မှာတုန်းကတော့ ရေးဖို့ စာတွေ တန်းစီပြီး စဉ်းစားထားတာ ဒီပြန်ရောက်တော့ ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိ မရေးဖြစ်သေးပါဘူး .. မိုးခါးဘလော့ ခြောက်တီး ခြောက်ကပ်ပါပဲ .. တကယ်က ရေးဖို့တွေ စဉ်းစားမိရဲ့နဲ့ အပျင်းတစ်တယ် ဆိုပါတော့ .. :D
ခုတော့ ရန်ကုန်အကြောင်း စမြုံ့ပြန်ဖို့ သတိရပါတယ် ..
ရန်ကုန်ပြန်သွားခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး .. ဒီဇင်ဘာ ၁၅ကမှ ပါ .. :D
အားလုံးပေါင်း ၁၀ရက် နေခဲ့ပါတယ် .. မေမြို့ ၅ရက် ရန်ကုန် ၅ရက်ပေါ့ .. ခုတခေါက်ပြန်တာ အိမ်မှာ အကြာကြီး နေလိုက်ရသလိုပါပဲ .. မိသားစု ၄ယောက်လည်း စုံတယ် ဆိုပါတော့ .. မေကြီးလည်း ခွင့်ယူထားတော့ အချိန်ပြည့်တူတူဖြစ်နေပါတယ် ..
မေမြို့ကိုသွားတော့ နေပြည်တော်ကို ဖြတ်ရတဲ့ လမ်းက သွားဖြစ်ပါတယ် .. လမ်းက တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ် .. ဆိုးတာက နေ့ဘက်ဆို အရိပ် မရှိတာပါ .. တော်တော်ကို ပူပါတယ် .. ညဘက်ကျ တမျိုးဆိုးပါတယ် .. မီး လုံးဝ မရှိတာပါ ..
နေပြည်တော်ထိကို လမ်းအသုံးပြုခ ၅၀၀၀ ကျပ် လို့ ထင်ပါတယ် .. ပေးရပါတယ် .. ၁၁၅ မိုင်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေ ဖွင့်ထားပါတယ် .. အသွားတုန်းက မစားဖြစ်ပါဘူး .. အပြန်ကျ စားဖြစ်ပါတယ် .. အစားအသောက်တွေက မဆိုးပါဘူး .. ကောင်းပါတယ် .. ဆက်ဆံရေးကတော့ နဲနဲ ဆိုးသလိုပါပဲ .. (ဒါကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုးတော့ ရိုးနေပါပြီ .. ရောင်းသူတွေဘက်က ၀ယ်ချင်ဝယ် မ၀ယ်ချင်နေ စားချင်စား မစားချင်နေဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီး ဆိုတော့ကာ)
အောက်က ပုံတွေကတော့ နေပြည်တော်သွားရာ လမ်းတ၀က်က မြင်ကွင်းပါ ..
အောက်ကပုံတွေကတော့ နေပြည်တော်ရဲ့ မြင်ကွင်းတချို့ပါ ..
ရှမ်းစားသောက်ဆိုင် .. စား၍မဆိုးပါ ..
တောင်ကုန်းပေါ်မှ မြင်ရသော ရှုခင်း တခု
နေပြည်တော်အ၀ိုင်း၁ခု (စုစုပေါင်း ၄၀ိုင်း ရှိပါတယ်)
သစ်တောရုံးထင်တယ် .. (အထဲမှာ ဆင်ရုပ် ရှိတယ် ..)
အောက်က ပုံတွေကတော့ နေပြည်တော် မြို့တော်ရဲ့ ညဘက် မြင်ကွင်းပါ .. လှပါတယ် .. တလမ်းလုံး မှောင်လာသမျှ နေပြည်တော်ကျ မျက်စိကို ကြိမ်းရော .. :D
လမ်းမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မြင်ရပါသေးတယ် .. ဘာတွေလဲဆိုတော့ .. ကလေးတွေပါ .. နေပြည်တော် ကားလမ်းမကြီးတလျှောက်က တောင်ကို ဖြိုပြီး ဖောက်ထားတာမို့ လမ်းဘေး ၀ဲယာ အနီးအနားမှာ ရွာလိုမျိုးနေရာတောင် မရှိပါဘူး .. မမြင်ရပါဘူး .. ဒါပေမယ့် လမ်းဖောက်နေတဲ့ လူတချို့ နေရာတချို့ (တချို့လည်း နဲနဲ တချို့နေရာ ဂိတ်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ လူတော်တော်များများ) တွေ့ပါတယ် ..
အရိပ်မရှိတဲ့ လမ်း .. လူနေအိမ်မရှိတဲ့ လမ်းမှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ လူ တချို့ တလေကိုလည်း တွေ့ပါတယ် .. ကလေးလည်း တွေ့ပါတယ် .. ကျမ တော်တော် အံ့သြမိပါတယ် .. သူတို့တွေ ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲ .. ဘယ်ကနေ လာတာလဲ .. ဘာသွားလုပ်မှာလဲ .. ဘယ်မှာနေတာလဲ .. မေးခွန်းတွေ တသီတတန်းကြီး ထွက်လာပါတယ် .. နောက်တော့လဲ အနီးအနား အိမ်လေး ယာလေး ရှိကောင်း ရှိမယ်လေလို့ တွေးလိုက်ပါတယ် ..
အိမ်က လုံးဝ မတွေ့တာမဟုတ်ပဲ တွေ့တော့ တွေ့ပါတယ် .. တောင်စွန်းနားမှာ ၀ါးလုံးလေးတွေနဲ့ ဟိုးနား တအိမ် ဟိုးနား တအိမ်ပေါ့ ..
ပြီးတော့ ကလေးတွေ .. လမ်းခင်းဖို့ အုတ်တွေ သယ်နေတာ တွေ့ပါတယ် .. အုတ်ခဲကျိုးပေါ့ .. ၂ယောက် ရှေ့တယောက် နောက်တယောက် ထမ်းစင်လေးလိုဟာနဲ့ ဟိုဘက်ကားလမ်း သယ်သွားလိုက် ဒီဘက်ကားလမ်း သွားဖို့လိုက်နဲ့ပါ .. အဲဒီလမ်းက ကားတွေက အသားကုန်မောင်းကြပါတယ် .. ကျမ အမြင် အတော်လေး အန္တာရယ်များပါတယ် .. ပြီးတော့ ကျမ တွေးမိတာက ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် .. ဒီလိုနေရာ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ ဒီလိုပဲ ပျော်သွားတော့မလား .. နေသွားတော့မလား .. တကယ် ရင်မောမိပါတယ် .. (ချရေးပြချင်ပေမယ့် လိုက် မမှီတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပါ ..) ငါသာ ဒီလိုဘ၀မျိုး ရောက်နေရင်လို့ တွေးပြီး တော်တော် ကြောက်မိပါတယ် .. သူတို့အတွက် ဘာသာတရား အဆုံးအမဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ .. မိဘဆိုတာကရော .. ဘယ်လိုမျိုးများ ဆုံးမတတ်မလဲ .. ပညာတတ်ရင် တော်သေးပါရဲ့ .. အိုး .. တွေးရင်း တွေးရင် တော်တော် အသက်ရှုပ်ကျပ်မိပါတယ် ..
ပြီးတော့ လမ်းလုပ်သားတွေ .. ကြီးကြီး ငယ်ငယ် အရွယ်စုံ .. နေပူကျဲတောက်ထဲမှာ အလေးအပင်တွေမ ဖုန်မှုန့်သဲမှုန့်တွေ ရှူ .. သူတို့အတွက် ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ .. အနာဂတ်ဆိုတာ ဘာလဲ .. ဟူး .. တော်တော် မရေရာတဲ့ ကိစ္စကြီးပါပဲ ..
ဖြူစင်သူတွေကို ညစ်ထေးအောင် လုပ်တယ် ...။
အဖြူထည်တွေကို အရောင်ဆိုးတယ် ...။
ငွေပေါ်လည်း ရွှေထပ် တတ်သေးတယ် ...။
လမ်းပေါ်ကလူတွေ လမ်းဘေးပို့တယ် ...။
လောကကြီးလည်း ဘာမှတော့ မလုပ်ရပါ
လောကကြီးလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်သာ ...။
တကယ်ကတော့ ရေးချင်တာတွေ မကုန်သေးပါဘူး .. စိတ်ကူးပေါက်တော့လဲ ထပ်ရေးရတာပေါ့နော် ..း)
အောက်မှာ သီချင်းလေးတပုဒ်ပါ .. အချိန်ရရင် နားထောင်သွားပါဦး .. အခြေအနေပေးရင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးလိုက်ကြပါဦး .. ကိုယ်တိုင်တော့ နားထောင်ပြီး ရင်ထဲ တော်တော် ဆို့ပါတယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/25/2011 12:46:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ခရီးသွားမှတ်တမ်း, မျှဝေခြင်း, ဟိုရောက် ဒီရောက်, အတွေ့အကြုံ
၉၆ နှစ်မြောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မွေးနေ့
ကျမဘလော့လဲ ၀ဲကင်းပြီ :D
ဟိုရောက် ဒီရောက် (၆)